MyKronoz ZeTie waa isku dhaf u dhexeeya smartwatch iyo saacadda analog | Wararka Gadget
MyKronoz ZeTime waa isku dhaf u dhexeeya smartwatch iyo saacad analog ah
Miguel Hernández | | Qalabka la gashan karo, qalabka
Saacadaha casriga ah waxay yeelan doonaan dhallinyaradoodii labaad sanadkan 2017, shirkado badan, tikniyoolajiyad iyo saacado casri ah, waxay qaadanayaan fursad ay ku soo bandhigaan moodallo cusub iyagoo ujeedkoodu yahay kaarbinta Android Wear 2.0, oo ah nidaam aad u karti badan meelo badan. Saacaddani waxay jebineysaa dhammaan qorshayaasheena, ma ahan oo keliya shaashadda taabashada ee smartwatch, mana ahan saacad analog ah, dhab ahaantii, waa labadaba. Aynu eegno saacaddan gaarka ah ee soo jiidan karta dareenka kuwa ugu nadiifsan, isla mar ahaantaana ay ka yaabin doonto kuwa jecel tikniyoolajiyadda, qaybo siman.
Dhirta waxaa lagu dhejiyaa daloolka midig ee bartamaha shaashadda, halkaas ayaa ah cirbadaha laga heli doono. Si kastaba ha noqotee, dhinac kale oo soo jiidasho leh ayaa ah sida saxda ah in cirbadaha ay socon doonaan illaa 30 maalmood oo dhaqaaq ah. Dabcan, waa inaan iska iloobin astaamaha ugu caqliga badan qalabka. Waa xiiso leh in la arko sida ay u hirgeliyeen qaar ka mid ah cirbadaha caadiga ah ee ku jira shaashadda wareega gaarka ah, oo leh naqshaddeeda cajiibka ah.
Saacaddani waa la jaan qaadi kartaa qalab kasta oo Android ah ka hor 4.3 Jelly Bean, iyo sidoo kale iPhone kasta oo ka sarreeya iOS 8 (lagu daray). Sidee bay noqon kartaa haddii kale, nooca ugu awoodda badan ee Bluetooth, 4.1 BLE, waa midka lagu soo daray sheygaas gaarka ah.
Saacadan, dhanka kale, wali lagama helin suuqa guud. Xaqiiqdii waa been firfircoon ololaha isku soo aruurinta, inkasta oo la siiyay sida ay u tahay mid la yaab leh, way ka badnaan doontaa codsi kasta. Sidan oo kale, saacadda isku dhafan waxay qayb ka noqon kartaa curcurkaaga. Qodob kale oo gaar ah ayaa ah in xargaha ay yihiin kuwo caalami ah, taasi waa, waxaad ku dhejin kartaa suun kasta sida saacad dhaqameed. Haa, ma laha awood farsamo xad-dhaaf ah, sida la filayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » MyKronoz ZeTime waa isku dhaf u dhexeeya smartwatch iyo saacad analog ah
Qualcomm ayaa lagu eedeynayaa Samsung inaysan ka iibin Exynoskeeda dhinac saddexaad
Dell UltraSharp waa kormeere 8K ah oo aan cidna dan ka lahayn